Jimmy Iovine haasi kubva kuApple, anoda kuti kutenderera kunyanye kunakidza | IPhone nhau
Jimmy Iovine haasi kusiya Apple, anoda kuita kutenderera kutonyanya kunakidza
Zvese zvinofanirwa kutaurwa, Apple Music yakave nekukura kwakanaka kubva payakatangwa muna 2015. Kubheja kukuru kubva kuvakomana kubva kuCupertino izvo zvinonyanya kukonzerwa nekusainwa kwaJimmy Iovine, mumwe wevanonyanya kukoshesa mimhanzi vagadziri venguva dzichangopfuura aive zvakare muvambi weBeats brand (zvakare iri yeApple nhasi). Kukura, kweiyo Apple Music, iyo inoteedzera iyo hombe Spotify, uye zvese nekuda kwenhamba hombe yemidziyo yeIOS iyo inounza inounza Apple mimhanzi yekushambadzira sevhisi.
Mazuva mashoma apfuura, pfungwa yekuti Jimmy Iovine anga achifunga kusiya Apple, Dzimwe runyerekupe idzo sezviri pachena dzaive dzakanangana nekumwe kupesana kwaiitwa naJiimmy Iovine neiyo Cupertino board. Iye zvino ndiJimmy Iovine iye amene anosvetukira kumberi, hongu, ku ratidza runyerekupe. Jimmy Iovine anogara kuApple, uye inogara kuti ienderere mberi munyika yekumhanyisa.
Sekutaura kwedu, kuenda kwake kwaitaurwa nerunyerekupe nekuda kwekumwe kufamba kwaaiita nemasheya ake eApple, izvozvi, achangobva kuburitsa chirevo umo anojekesa kuti acharamba ari mukambani, uye Achaenderera mberi nekumhan'arira kuna Eddy Cue naTim Cook kuti akure ese masevhisi ekambani.
Kuve ndakakomberedza makore makumi matanhatu nemashanu, ndanga ndiri chikamu cheApple kwemakore mana, ayo maviri nehafu ndanga ndichishanda neApple Music. Munguva yangu nguva paApple Music, tasvika kupfuura Mamirioni makumi matatu vanyoreri, zvakare Beats yakave nekukura kwakanaka. Asi isu tinoda kuita zvimwe ... Ini ndicharamba ndichiraira Eddy, Tim, uye chero nhengo yeApple, kubatsira chero nenzira yandinogona uye kutora zvese zvakaitwa nekambani kusvika kumagumo. Ndichiri kuApple.
Zvino isu tinongofanirwa kumirira kuti tione izvo Jimmy Iovine anogona kuunza kukambani, pasina kupokana, nyika yekutenderera ichaenderera ichichinja, saka ngatigare pasi tione kuti chii chitsva kubva kuApple nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Jimmy Iovine haasi kusiya Apple, anoda kuita kutenderera kutonyanya kunakidza
Apple maseva anosaina zvekare shanduro dzekare dzeIOS 11, tinogona kudzikisira kubva kuIOS 11
Pokémon GO inomira ichipa mukana kune izvo zvishandiso zvisingaenderane neIOS 11